Xubno Ka mid ah qoyska Hogaamiyaha ISIS oo xabsiga La dhigay. - iftineducation.com
Xubno Ka mid ah qoyska Hogaamiyaha ISIS oo xabsiga La dhigay.
iftineducation.com – Wararka laga helaayo dalka Lubnaan Ayaa sheegaya in ciidamada Dalka Lubnaan ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah qoyska Hogaamiyaha ISIS SH. Abubakar Al-baqdaadii.
Wararka ayaa waxa ay inta ku darayaan in la qabtay xaaska Al-baqdaadii iyo wiil uu dhalay xili ay u gudbi rabeen Xadka Dalka Lubnaan, waxayna wararka intaa ku darayaan In ay wateen waraaqado sharci been abuur ah.
Lama garanaayo Talaabada ay qaadi doonto Dowlada Lubnaan ayadoo ay jirto in kooxda ISIS ay heystaan qaar ka mid ah ciidamada dalka Lubnaan ayagoo sheegay in ay qoorta ka jari doonaan ciidamada ay ka heystaan dalka Lubnaan.
Cali Dheere oo ku hanjabay in weeraro kale ay ka fulinayaan dalka Kenya, haddii ciidamada Kenya laga saarin Somaliya
Dowladaha Turkiga iyo Ruushka oo heshiis wada gaaray.